प्रहरी क्याम्पभित्रै गोली चल्यो, के छ अवस्था ? थप बिबरण सहित — Imandarmedia.com
प्रहरी क्याम्पभित्रै गोली चल्यो, के छ अवस्था ? थप बिबरण सहित
काठमाडौ। बिहिबार राति केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स सीआरपीएफका एक जवानले आफ्ना साथीहरूमाथि एके–४७ ले फा’यरिङ गरेका छन्। घटनामा चार जना जवानको मृत्यु भएको छ भने ३ जना घाइते रहेका छन्। यसमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
गम्भीर घाइतेहरूलाई हेलिकप्टरको माध्यमबाट रायपुर लगिएको छ। घटनापछि आरोपित जवानलाई हिरासतमा राखिएको छ। हालसम्म उनले किन गो’ली चलाए भन्ने खुल्न सकेको छैन।
जानकारी अनुसार यो घटना कोटा विकासखण्डको ग्राम लिंगनपल्लीस्थित २१७ बटालियन क्याम्पमा भएको थियो। बिहान ३ बजेर १५ मिनेट जाँदा रितेश रञ्जन नाम गरेका जवानले साथीहरूमाथि फायरिङ गरेका थिए। गोली लागेर दुई जना जवानको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
यो क्याम्पमा ८५ औँ बटालियन जवानको पनि क्याम्प रहेको छ। राति गोली चलेपछि क्याम्पमा भागदौड मच्चिएको थियो। अन्य जवान दौडेर घटनास्थलमा पुगेपछि अफिसरहरूलाई जानकारी दिइएको थियो।
त्यसपछि घटनामा घाइते भएका पाँचजना जवानलाई ११ किलोमिटर टाढा रहेको तेलंगानास्थित भद्राचलम अस्पताल लगियो। उपचारका क्रममा थप दुई जनाको मृत्यु भयो। घाइतेमध्ये दुई जना गम्भीर रहेकाले उनलाई रायपुर रेफर गरियो।
बदलाको भावना वा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको कारणले यो घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। एक दिनअघि मात्र आरोपितको उनको साथीहरूसँग विवाद भएको थियो। उनी केही दिनदेखि तनावमा रहेको पनि बताइएको छ।
यस्तै यता इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल काधिमीले आइतबार आफ्नो आधिकारिक निवासलाई लक्षित गरी ड्रोनद्वारा गरिएको ह’त्या प्रयासको आलोचना गर्दै देशको भविष्यका लागि सबै इराकीहरूबीच शान्ति वार्ताका निम्ति आह्वान गरेका छन्।
अल–काधिमीले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर पेजमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा आफू र आफ्नो निवासमा रहेका अन्य कामदारहरू सुरक्षित रहेको पुष्टि गर्दै कायरतापूर्ण क्षेप्यास्त्र र कायर ड्रोनले मातृभूमि वा भविष्य देशको लागि निर्माण गर्दैन।
भन्दै राज्य र यसका संस्थाहरूलाई सम्मान गरेर मात्र सबै इराकीहरूको लागि राम्रो भविष्य सृजना गर्न सकिने बताउँदै सबल र सुन्दर मातृभूमि निर्माण गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
म सबै पक्षहरुलाई इराक र यसको भविष्य निर्माण गर्न शान्ति वार्ताको सहारा लिन आह्वान गर्दछु अल–काधिमीले आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेका छन्।
बिहानको समयमा अल काधिमी इराकी सरकार र विदेशी दूतावासका केही मुख्य कार्यालयहरू रहेको बलियो सुरक्षायुक्त ग्रीन जोन स्थित उनको निवासमा बुबी ट्रप ड्रोनद्वारा आक्रमण गरिएको थियो।
गत महिनाको चुनावी नतिजालाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक दलका अनुयायीहरूले गरेको विरोधको बीचमा हत्याको प्रयास भएको हो। शुक्रबार प्रदर्शनले ग्रीन जोनको प्रवेशद्वारमा सुरक्षाकर्मीहरूसँग झडपको उग्र रूप लिएको थियो।
जसमा दुई प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। गत अक्टोबर १० मा भएको संसदीय चुनावको मत परिणामबाट असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूले चुनावमा धाँधली भएको र ‘बनावटी परिणाम’ स्वीकार नगर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
इराकी स्वतन्त्र उच्च निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूद्वारा पेश गरिएका अपील र गुनासोहरूलाई विचार गरिरहेको बेला राजधानी बगदादलगायत इराकी शहरहरूमा चुनावी परिणामहरूलाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरूका अनुयायीहरु सडकमा आन्दोलित छन्।
तेस्तै, ब्राजिलमा बैंक चोरी गरेको आरोपमा २५ जना मारिएका छन्। आइतबार बिहान देशको दक्षिण पूर्वमा पर्ने मिनास गेराइस राज्यमा बैंक चोरीका आरोपितहरूले चोरीको तयारी गरिरहेका बेला ब्राजिल प्रहरीले उनीहरूमाथि गोली चलाएको थियो।
सो मिसनमा सहभागी संघीय सरकारअन्तर्गतको प्रहरीले आरोपितहरूसँग विष्फोटक पदार्थ, बुलेटप्रुफ भेस्ट तथा ५०–क्यालिबर मेसिन गनजस्ता अत्याधुनिक हतियार रहेको बताएको छ।
उनीहरूबाट राइफल, ग्रिनेड तथा चोरीका गाडीहरू बरामद गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। यस्ता समूहले बैंक लुटेपछि प्रहरीबाट बच्नका लागि चोरी गरेका गाडीहरूमा आगजनी गरेर सडक अवरुद्ध गर्ने गरेको पनि प्रहरीले बताएको छ।
ब्राजिलमा गत अगस्ट तथा सन् २०२० को डिसेम्बरमा पनि हतियारधारी समूहले बैंकमा आक्रमण गरेका थिए। प्रहरीले आइतबार मारिएका आरोपितहरूले स्थानीय बैंकहरू लुट्ने भावी योजना बनाइरहेको बताएको छ।
मारिएका आरोपितहरूको पहिचान भने खुलाइएको छैन। उनीहरू विगतमा बैंक लुट्ने समूह हुन सक्ने पनि प्रहरीले बताएको छ। ब्राजिलमा विशेष योजना बनाएर अत्याधुनिक हतियारसहित बैंक लुट्ने घटना बढ्दो छ।
गत वर्ष ब्राजिलमा प्रहरीद्वारा ६४०० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। मारिनेहरूमा अधिकांश अश्वेत नागरिक रहेको बताइएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सेनारो बन्दुक समर्थक मानिन्छन्।
सुरक्षा फौजको सहयोगले सन् २०१८ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका मानिने उनले निवार्चित भएलगत्तै ‘अपराधीरूले सडकमा नै मर्नुपर्छ, भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए।